Project Power (2020) - Channel Zone
Posted by Little Man, Released on August 16, 2020, More episodes Project Power
Download Project Power (2020), Watch Project Power (2020), don't forget to click on the like and share button. Series Project Power always updated at Channel Zone. Don't forget to watch other series updates.
Project Power (2020)================IMDb Rating – 6.1/10#UnicodeAugust 14 ရကျနကေ့ Netflix ကနပွေသသှားတဲ့ Action, Crime, Sci-Fi ကားကောငျးလေးကို
တငျပေးခငျြပါတယျ။ ဇာတျလမျး အကြဥျးလေးကိုပွောပွရရငျတော့ . . .နယူးအျောလငျးမွို့ရဲ့ လမျးတှပေျေါမှာ ဆေး အသဈအဆနျးတဈမြိုးရဲ့ သတငျးက ပြံ့နှံနပေါတယျ။ထိုဆေးက မူးယဈစတေဲ့ ဆေးမဟုတျဘဲ သောကျလိုကျတဲ့လူကို ၅ မိနဈခနျ့ စူပါစှမျးအားပေးတဲ့ဆေးပါ။ကိုယျက ဘာအစှမျးရမယျဆိုတာကိုတော့ သောကျပွီးမှပဲ သိရမှာပါ။ တဈခြို့က ကိုယျပြောကျနိုငျတယျ။တဈခြို့က သနေတျပွီး တယျ။ အဲဒီလိုကှဲပွားတဲ့ အစှမျးတှပေေးတဲ့ဆေးကို အသုံးခပြွီး လူတှကေ ပဈမှုတှကြေူးလှနျလာတဲ့အခါမှာတော့ ရဲတှအေနနေဲ့ ဘယျလိုဖွရှေငျးကွမလဲ။ ဒီဆေးတောငျ့တှေ ဘယျကရောကျလာတာလဲ။ ဒီဆေးကိုဖနျတီးရတဲ့ ရညျရှယျခကျြကဘာလဲ ဆိုတာကို ဆကျလကျကွညျ့ရှုလိုကျပါ။(ဒီဇာတျလမျးရဲ့ အညှနျးနဲ့ဘာသာပွနျရေးသားပေးသူကတော့ Htet Wai Lwin ပဲဖွဈပါတယျ။)#ZawgyiAugust 14 ရက်နေ့က Netflix ကနေပြသသွားတဲ့ Action, Crime, Sci-Fi ကားကောင်းလေးကိုတင်ပေးချင်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်း အကျဉ်းလေးကိုပြောပြရရင်တော့ . . .နယူးအော်လင်းမြို့ရဲ့ လမ်းတွေပေါ်မှာ ဆေး အသစ်အဆန်းတစ်မျိုးရဲ့ သတင်းက ပျံ့နှံနေပါတယ်။ထိုဆေးက မူးယစ်စေတဲ့ ဆေးမဟုတ်ဘဲ သောက်လိုက်တဲ့လူကို ၅ မိနစ်ခန့် စူပါစွမ်းအားပေးတဲ့ဆေးပါ။ကိုယ်က ဘာအစွမ်းရမယ်ဆိုတာကိုတော့ သောက်ပြီးမှပဲ သိရမှာပါ။ တစ်ချို့က ကိုယ်ပျောက်နိုင်တယ်။တစ်ချို့က သေနတ်ပြီး တယ်။ အဲဒီလိုကွဲပြားတဲ့ အစွမ်းတွေပေးတဲ့ဆေးကို အသုံးချပြီး လူတွေက ပစ်မှုတွေကျူးလွန်လာတဲ့အခါမှာတော့ ရဲတွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ။ ဒီဆေးတောင့်တွေ ဘယ်ကရောက်လာတာလဲ။ ဒီဆေးကိုဖန်တီးရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ ဆိုတာကို ဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။